M Bụ Ọsụ Ụzọ Pụrụ Iche Afọ Iri Ise | Nwanna Alisten Lumare
A MỤRỤ YA N’AFỌ 1927
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1962
ONYE Ọ BỤ Ọ bụbụ onyeisi ndị uwe ojii ma mechaa bụrụ ọsụ ụzọ pụrụ iche ruo ihe karịrị afọ iri ise.
N’AFỌ 1964, aghọrọ m ọsụ ụzọ pụrụ iche. E zigakwara m na Manokwarị nke dị n’Ebe Ọdịda Anyanwụ Papụa ka m na-eje ozi. E nwere obere ọgbakọ n’ebe ahụ. Ndị ụkọchukwu nọ́ ebe ahụ na-enyekwa ụmụnna anyị nsogbu. Obere oge m kwatara na Manokwarị, onyeisi chọọchị Protestant ji iwe bịa n’ụlọ m, sị m:
“M na-aga ịkụtu ụlọ a, meekwa ka a ghara ịhụ otu mkpụrụ Onyeàmà Jehova n’obodo a.”
Ebe m bụbu onye uwe ojii, mba ahụ ọ bara atụghị m ụjọ. Ma, m medara obi gwa ya okwu, ya ejiri nwayọọ laa.—1 Pita 3:15.
N’oge ahụ, e nwere naanị ndị nkwusa asatọ na Manokwarị. Ugbu a ihe dị ka afọ iri ise gacharala, e nwere ọgbakọ asaa na ya. Ihe karịrị otu puku mmadụ na narị abụọ bịara mgbakọ ukwu anyị n’afọ 2014. Mgbe m hụrụ otú Jehova sirila gọzie anyị n’ebe a bụ ime obodo, obi na-abụ m sọ aṅụrị.
Ụfọdụ Ndịàmà Jehova na-eji awa iri atọ, iri awa ise ma ọ bụ karịa aga ozi ọma kwa ọnwa. Gịnị mere ha ji ekpebi na ha ga-abụ ndị ọsụ ụzọ?
Gịnị Mere Ndịàmà Jehova Ji Aga n’Ụlọ Ndị Mmadụ Ezi Ha Ozi Ọma?
Chọpụta ihe Jizọs gwara ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-eme.
Text Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2016
Audio Họrọ ụdị nke ị ga-adanlodu Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2016